“Efa ritra tanteraka nitsaboana an’ity zanakay ity ny vola aman-karenanay. Avy nanao vakansy tamin’ny taon-dasa no nisy fotsifotsy teo amin’ny maso roan’ny zanakay. Nivadika mainty izany avy eo ary sitrana soamantsara ny ilany. Nentina tamin’ireo toeram-pitsaboana teto an-drenivohitra ary nolazaina fa “cataracte”, ka 1 400 000 ariary no nitsabo azy, tamin’izany. Niha-nihombo anefa ny soritr’aretin’i Nombana ka mila 6 600 000 ariary indray entina hitsaboana azy mitohy anaty 21 andro ao amin’ny HJRA”, hoy ny rainy, Todisoa Aimée Rakotoarisoa.
Nanazava hatrany ny fianakaviany fa tsy nentina nidina tany anaty ranomasina fa teny amin’ny torapasika ihany io zaza io tamin’izany. Niezaka hatrany koa ireo fianakaviana nanaja ny fomban-tany sy ny fady rehetra tamin’ny fialantsasatra ny volana aogositra, tamin’ny taon-dasa. Fito andro taorian’ny fodiana avy any Mahajanga no hita ilay soritr’aretina ary ny volana febroary teo no niha nihombo izany. Tsy vola ihany no andraindrain’ny fianakaviana fa izay torohevitra mety hahasalama an’ity menaky ny ainy ity.